Filmstrips - a ukubingelela ezithobekile ekhulwini XX. Kwamahora ambalwa wachitha ubabhekile, akasoze kubhekwe ukuchitha isikhathi sakho, ngoba esijabulisayo kodwa futhi ezithakazelisayo ukwenza. Futhi, ke futhi iwusizo kakhulu uma ubeke umucu wefilimu zemfundo!
I imilingo emhlabeni ukuthi kusisondeza buka, akhethekile njalo egcwele izimangaliso futhi inganekwane. Iyoba egcwele uthando nomusa ngaso sonke isikhathi. Okuza wokudlala ephelele cognition kokubili emhlabeni wangempela futhi kumnandi!
Abadala ababe nakho ebuntwaneni ukubukela amabhayisikobho kanye filmoskop njalo uwakhumbule basazikhumbula. Futhi-ke, ekugcineni, emva kwayo yonke leminyaka, ngaphinde wakhumbula kubo, baphinde kungabonakala ukudayiswa, yebo, eduze isizukulwane esisha namaphrojektha. Omunye walena uwukuba lwanamuhla slide wokudlala filmoskop Regio.
Manje, futhi, ungathatha aphume ekamelweni kakade enothuli ifilimu izithombe, bheka futhi lokho Sekuyisikhathi eside ukhohliwe, futhi ubonise izingane edume Soviet ifilimu emapheshana. Kungakhathaliseki ukuthi ubheke, futhi uthenge slide wokudlala - kuwumqondo omuhle. Futhi izingane ngeke sibe nesithakazelo, futhi ngeke aphinde alibone opopayi ngokukhula kwami!
Diaproektor Regio ufanelwe Izibuyekezo emihle kuphela, ngoba ezenziwe ngezinto ephephile impilo yengane, azikho emakhoneni ebukhali, nokuthi kubaluleke kakhulu, kulula ukusebenzisa ngisho izingane. It yakhelwe ngendlela yokuthi kusheshe isithakazelo wengane. ingane yakho iyofunda enothi ukufaka, ukupheqa bese ayeke ifilimu. Ngakho ngokushesha, uma efuna ukubona filmstrip ngokwayo, ukusiza abantu abadala akazange uludinga.
Njengamanje, wokudlala emkhathini wezulu, ithi filmoskop Regio ( "Reggio") yilona kuphela esiwusizo futhi izindleko Analogue filmoskop esidlule. It ngempela ehloniphekile kudivayisi. Ngaphezu kwalokho, uma uqhathanisa amanani entengo filmoskop Soviet namanani ezitjhelelako wokudlala Regio, kuba ngisho kwi kancane ngenxa eshibhile ukukhiqizwa ubuchwepheshe kanye nezindleko zokwakha esiyinhlanganisela!
Futhi manje kabanzi mayelana nokubonakala imodeli!
Ngokuba jikelele Ukucaciswa slide wokudlala Regio akuzona kakhulu palpably sihluke filmoskop XX leminyaka. Umehluko omkhulu - it is a design kuphela ambalwa Futuristic, Ergonomics omkhulu kanye nosayizi compact (ngokuziqhathanisa).
Diaproektor Regio akhiqizwa Yabantu Republic of China ngo 2009 ngomyalo inkampani efanayo, ngokusekelwe ngokomthetho eNorway. Njengoba le divayisi yohlobo ifilimu, kungenzeka ukubuka hhayi kuphela ifilimu elisha, kodwa futhi amafilimu Soviet ubudala futhi opopayi, kanye ifilimu izithombe.
Indaba ka udonga lwangaphandle wokudlala phezulu - okuyimfanelo plastic-non-enobuthi ngemibala emibili: grey futhi okwesibhakabhaka. Ngokwaso idivayisi unamandla kakhulu, kodwa hhayi ubufakazi, ezineminyaka engaphezu 6 kungenzeka ukuyisebenzisa ngokuzimela. Kodwa ngisho noma ngephutha uwela, kungenzeka bunjalo futhi zisebenza kahle. Abasebenzisi silivume lelo qiniso.
Iphakheji, ngaphandle wokudlala phezulu Regio, sihlanganisa ishaja nebhethri, yokusetshenziswa futhi isibani sokuphumula.
ikhwalithi yesithombe (ngenxa ngesibani ubudala) kungaba ephansi kakhulu kunalokho ngentsha. Kufaka azikho izingxenye ezincane ukuthi kungenziwa okugwinywe ingane.
Uma une ingane kwaba filmoskop, yokuthi ukuba baqonde indlela ukusebenzisa wokudlala, ungathathi isikhathi eside. Kukho konke, ngezansi kulotshiwe iziqondiso ezicacile. Ukuqala ababukele a filmstrip usebenzisa i-slide wokudlala "Regio" (Regio), udinga ukwenza ezimbalwa ezilula izinyathelo.
Thola ifilimu osithandayo.
Faka it zingene slot phezu chassis.
Lungisa ebonakalayo isondo kuze eyeka ke.
Lungisa ukukhanya (slide namaphrojektha, kanye filmoskop, ukulawula ensimini).
Skrola ifilimu bese ujabulela umbukiso.
Ikakhulukazi ukuba umntwana kulula ukukhumbula indlela ukuze ujike ngaphakathi nangaphandle kwe-slide wokudlala Regio, izinkinobho zinkulu ngokwanele. Wenziwe abomvu. Kukhona nomshini wama-slide kanye inkinobho lincane, kubuye kube abomvu. Kufanele isetshenziswe uma ufuna ukususa ngokushesha ifilimu kusukela wokudlala emkhathini wezulu, ithi ngaphandle kokuba ukupheqa kuwo. Njengoba wonke operation inqubo okungukuthi kakhulu lula, ingane ikani ukusetshenziswa filmoskop ungasizwa muntu.
Ukuze ukuthi ungakwazi ukushintsha engela filmoskop, akusadingeki ukusebenzisa lezinto angaphandle. wokudlala Okuza ifakwe esitebeleni unyawo adjustable. A plus elikhulu ekusebenziseni kudivayisi - Kuthule yayo, abathengi bathi.
Ngokungafani nezizukulwane zesikhathi esidlule filmoskop filmoskop Regio-slide wokudlala akuyona ukufuthelana, njengoba kukhona amathuba ukususwa ukushisa okudlulele, futhi ngalokho, ayakhelwe ezinomsindo emoyeni Ukupholisa isistimu ukuthi amaphi zingase zephule wonke emkhathini ukuphequlula filmstrips.
Idivayisi kuwufanele yokwenziwa Ukupholisa uhlelo. Diaproektor Regio uzokunika nomndeni wakho eningi injabulo kanye nemizwelo emihle ezokwenza bahlala enkumbulweni yakho isikhathi eside. Khona-ke ingane yakho Uzokhumbula lezi ukusebenza basezindlini ngokunakekelwa uhlobo olufanayo ISIFISO, njengawe.
wokudlala Okuza sisonke ayimeleli iyiphi ingozi nengane. Noma kunjalo, akufanele awubeka ezingeni yengane yakho noma ngaphezulu kwekhanda lakho. Angaba ukudonsa intambo ukushaja kuwa futhi kakhulu kungenziwa hit kid. Ngakho uzowathola ushiye kangcono wokudlala phezulu ukuze ingane akusho ubuhlungu yena, kodwa wayekwazi ukusebenzisa lisebenze ngokwakho.
Child Development nge filmoskop Regio
Eqinisweni, afakwa filmoskop opopayi kude kuwusizo kakhulu kunokulandela evamile, ukuthi izingane zakho babuka isikrini noma ikhompyutha TV. Amakhathuni ebodeni ukuthuthukisa umcabango futhi ashukumise ukuthuthukiswa ukunakekelwa ukuzwela.
Njengoba kukhona akunamsindo filmstrip ukusetshenziswa lelandzisako engezansi. Abazali bheka filmstrips nengane yakho bese ufunda ukubhala kwakhe (Yiqiniso, uma kuyintando uqobo lokhu bengayi), eziyobenza bathole kakhulu.
Ngakho izinyane ithuba qhathanisa lokho ayekufunda, awubonayo esikrinini. Ngaphandle ekuthuthukiseni isikhungo sicubungule maphakathi okuqonda sibonwa ingane. Futhi, ngamunye isithombe esivezwa eliqhakaze ngempela futhi ezimibalabala Kunengqondo ukuthi kwakuyoba uzomthakazelisa.
Uma ingane yakho ngokweqile asebenzayo, ngosizo i wokudlala phezulu Regio uzokwazi ukunqanda Uyayobayobeka wakhe. By endleleni, uma uthenge filmstrip ezemfundo, nomndeni wakho uzobheka hhayi kuphela fun, kodwa futhi ewusizo ekuthuthukiseni zezingane. Futhi uzothola okuhlangenwe nakho eliyigugu ukujwayelana kakhudlwana nabathandekayo babo.
Iyunithi likhandelwe ukubukwa namafilimu nama-slide. Filmstrips ukuze Regio slide namaphrojektha akufakiwe, kodwa ungakwazi ukuthenga kubo endaweni efanayo lapho afike athenga khona insimbi. Le kit iqukethe 4 kuya ku-6 amafilimu okuhloswe ngaso abantwana kusuka 2 kuya kwezingu-8 ubudala noma ngaphansi. Kodwa njengoba umthetho, abasakwazi efanelekayo ifilimu opopayi ubudala Soviet. Lokhu kuboniswa abasebenzisi.
Ngakho, i-main izici lobuchwepheshe:
- Umkhiqizi unika ifektri yesiqinisekiso izinyanga ezingu-12. Kodwa uma oda, ungakwazi ukuthenga isiqinisekiso esongeziwe izinyanga kuze kufinyelele 24.
- Amandla isikhathi sokusebenza (nge amabhethri ezine uhlobo D).
- phezulu wokudlala isibani has a amandla 110 lumens, okuyinto okungukuthi impela okuhle inkomba. Ngenxa isibani isithombe esinamandla kangaka kuxhopha futhi icacile. Life ngokwayo LED-izibani - amahora angaba yizinkulungwane 20 (isiyonke).
- Usayizi isithombe ngokwaso - mayelana 130 ngamasentimitha.
- It has a isisindo ongaphakeme, mayelana 1.45 amakhilogremu.
Thenga i wokudlala phezulu kungaba ezitolo noma izitolo ezikhethekile. Akuvamile, kodwa futhi atholakala ezitolo abendlu nekhompyutha imishini. Uzongithanda slide wokudlala Regio.
Intengo isilinganiso i wokudlala phezulu Regio kuhluka 6 th. Ukuze 9 th. Ruble, okuyinto ngempela akwamukeleki lolu hlobo ubuchwepheshe. Izindleko ezinjalo ebiza kakhulu, ngisho abantu abahola ongaphakeme!
Uma ufuna ukunikeza ingane yakho ithuba ukuthuthukisa amakhono zokudala kusukela esemncane, ukunikeza izingane zakho ozithandayo inganekwane egcwele magic, noma ukukwazi isikhashana, kodwa namanje hamba ngenkathi useyingane, musa skimp. Zizwe ukhululekile ukuthenga idivayisi. Ngokuvamile, intengo filmoskop kushintsha njalo, futhi njengoba izibalo zibonisa, iye kancane kancane kuyancipha ngenxa ukwehla kancane kancane izindleko futhi anda isidingo imikhiqizo yalolu hlobo.
Amakhasimende Usukuthengile futhi ngajabulela Regio wayekujabulela ngokuthenga kwakhe, ngoba imindeni yabo babe nogqozi entsha esivamile. Uyacabangela intengo, izinga kanye kalula yokusetshenziswa - konke wokudlala phezulu Regio. Uphenyo bonke abaye ngichithe kusihlwa emangalisayo ukubukela ibhayisikobho kudivayisi, kuqinisekisa ngokugcwele ulwazi olunikeziwe kule athikili.
Kunini futhi kungani asemabhodleleni Cupid?